South Dakota akka biyyati guututi nama talaala corona virus kan jalqabaa fudhateen jalqaba ira aka jirtu himan. Amma ogeeyin fayyaa nama taalali kana fudhachuu hin feene irrati yaada jijjiiranii jiru. South Dakota keessati akka qoranoon godhametti parsantii 30% kan ta’an talaali kana fudhachuuf yaadu jiru.
Kaampanin insurance kan Cedar Rapid City nama motora gurraasha oofu eega poolica adiidhan wayta traffic stop birrati bara 2016 keessa dhahame paralayzed tae $million 8 akka kafaluufi murteesan hime.
Kaffaltiin magaala Iowa guddaa lama keesatti jiraattota guaracha fi hoggantoota jidduuti dhukaasa banameen ilaalchise Jerime Mitchell himannaa yeroo dheera booda kan sirreesu ta’a.
Jones summer darbee keessa seera qorannoo diduudhan kan argamee yoo tau sababa sanis ariamee jira.
Yeroo jalqabaatif daldallii gurraacha fi brown jidduuti godhamuuf baname walgahii West Des Moines Chamber torbaan kana keessa geggeefamu jira.
Qophiin kunnis daldala xixiqqaa kanniin akkka isaan gudataniif kan qarqaaru tauu isaa himan.
Qophiin kunnis qophii wagga akka tauu abdii ni godhatu.
Maneen sirbaa gurgurddaa kan Sioux City keesatti argamuu bakka haara bohaarsana fi daawi akka tau karoorfachuu isaani himan.
Hotel Hard Rock kan Anthem fi maneen qumaara qophii sadafaadhaf June fi July keeessa qophaahu jiran.
Haala nageenya Covid-19 irrati hundaahe haguugu fuula kan godhachiisudha, Garuu jarri hin godhatani.